Barnaamijka publisher Wondershare-qaybinta iyo
Qaybinta & Daabacaadda
Share Our Success kordhaaya ee Industry
Wondershare Barnaamijka reseller awood u resellers si loo faa'iidada sare by iibinta alaabta Wondershare la isticmaalayo channels marketing iyaga u gaar ah ee suuqyada maxalliga ah. Waxaan aad u danaynaya qaybinta naga software dhex resellers on dal gaar ah ama gobol diirada. Maxaa yeelay, waxaan u malaynayaa in suuqa kasta oo ganacsi kasta baahan tahay in hab shakhsi ah, waxaan go'aansaday in ay beddelaan wadahadal shaqsi halkii yeynan hoos waqti xadidan. Muga Iibka iyo ballan si kor loogu qaado Wondershare ayaa ah waxyaalaha muhiimka ah ee go'aaminta iskaashi. Wondershare bixisaa kala duwan fursado la-hawlgalayaasha qaybinta si loo daboolo baahida suuqa gaarka ah ee macmiil kasta.